Qoyksa Almaas Elman oo dowladaha Canada iyo Soomaaliya ka dalbaday inay ka qeyb qaataan baaritaanka – Hornafrik Media Network
Qoyksa Almaas Elman oo dowladaha Canada iyo Soomaaliya ka dalbaday inay ka qeyb qaataan baaritaanka
By Liibaan Nuur	 On Nov 24, 2019
Qoyska Allaha u naxariistee Almaas Elman Cali Axmed oo 20-kii bishan ee maalintii Khamiista lagu dhex toogtay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ayaa dalbaday in baaristaan lagu baadi goobayo cidii dishay gaba dhooda oo ay wado AMISOM lagu daro dowladaha Canada iyo Soomaaliya.
Qoyska ayaa qoraalka ay soo saareen bulshada uga codsaday in la joojiyo wararka badan ee lagu baahinayo Warbaahinta Bulshada iyo kuwa aan la hubin ee laga qorayo geerida marxuum Almaas Elman.
Almaas ayaa waxaa ay heystay dhalashada Dalka Canada,waxaana ay noqotay qofkii labaad ee heysta dhalashada dalka Canada oo sanadkan lagu dilo gudaha Soomaaliya.
“War kasta oo haatan laga soo saaro duruufihii ay Almaas ku geeriyootay waa kuwo laga hor-dhacay, mana noqon doonaan kuwo caawiya qoyskeenna. Wararkaa waxaa ka mid noqon kara in laysla dhex meero suuraggalnimada in ay Almaas dishay xabbad wiifto ah” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay qoyska.
Qoraalka oo dheeraa ayaa sidoo kale lagu yiri, “Waxaannu jeclaan lahayn in dilkii Almaas si buuxda loo baaro, waxaannuna codsanaynaa in ay dawladaha Soomaaliya iyo Canada si wadajir ah oo qoto dheer arrintan u baaraan, maadaama ay laheyd labada dhalasho ee labada dal.
Waxaannu ka war haynaa in la faafiyey muuqaallo iyo mu’aamarado aan sal lahayn. Muuqaalladaa iyo mu’aamaradahaasi waa kuwo qoyskeenna sii xanuunjinaya waqtigan adag. Sidaa darteed in la joojiyo iyo dib loo saxo ayaannu codsanaynaa”.
AMISOM ayaa sheegtay in xabadda ku dhacday Almaas ay ahayd mid aan gudaha Xerada Xalane laga riday islamarkaana ay baaris ku hayaan.
Marxuum Almaas ayaa noqotay qofkii labaad ee Soomaali ah heytana dhalashada dalka Canada oo sanadkan gudihiisa lagu dilay Soomaaliya.
Allaha u naxariistee Hodon Naaleeye oo heysatay dhalashada dalka Canada , waxay dib ugu soo laabtay dalka si ay uga qeyb qaadato dib u dhiskiisa , balse Qarax ka dhacay Kismaayo ayaa 12-kii July ee sanadkan ayaa lagu khaarajiyeey iyada iyo dad uu ku jiray seygeedii.
Dibad baxyaasha Hong Kong oo fariin u diray Shiinaha.